နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး
(၂) နတ်ဆိုတာ သမုတိနတ်၊ ဥပပတ္တိနတ်၊ ၀ိသုဒ္ဓိနတ်ဆိုပြီး (၃)မျိုးသာ ရှိတယ်။ မင်း၊ မိဖုရား၊ မင်းသားတွေဟာ သမုတိနတ်များ ဖြစ်တယ်။ ဥပပါတ်ပဋိသန္ဓေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ စတုမဟာရာဇ်စတဲ့ နတ်ပြည်(၆)ထပ်ဟာ ဥပပတ္တိနတ်များ ဖြစ်တယ်။ ပူဇော်အထူးကို ခံယူထိုက်တဲ့ ဘုရား၊ ရဟန္တာများဟာ ၀ိသုဒ္ဓိနတ်များ ဖြစ်တယ်။ အလှူပေးခြင်း၊ ဥပုသ်သီလစောင့်ထိန်းခြင်းများ ပြုလုပ်သူဟာ မင်းစည်းစိမ်၊ သူကြွယ်စည်းစိမ်၊ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်စည်းစိမ်တို့ကို ခံစားရပါတယ်။ လူတို့ရဲ့အသက်ဟာ အသက်(၁၀၀)ကနေ တစ်ရာထက် အနည်းငယ်လွန်ပြီး (၁၆၀)မျှလောက်သာ အသက်ရှည်ကြပါတယ်လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ (၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်-၄၃၇)
(၃) ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတိုင်း နတ်တို့ကို အမျှဝေရင် နတ်တို့က ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။ သူတို့ကို အမျှဝေခြင်းနဲ့ပူဇော်ရင် နတ်တွေဟာ အထူးနှစ်သက်တယ်။ အမျှဝေခြင်းနဲ့ ပူဇော်တဲ့သူကို နတ်တွေက တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မိခင်တစ်ယောက်က မိမိရင်သွေးကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ် သလို ပြုလုပ်ပေးကြတယ်။ နတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံရသူဟာ မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာရုံများနဲ့ မတွေ့ရဘဲ ကောင်းတဲ့အာရုံများနဲ့သာ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ (ဥဒါန၊ ပါ၊ ၁၈၈၊ ဋ္ဌ၊ ၃၇၉)
သိကြားမင်းကတောင် အထက်ပါအင်္ဂါ(၄)ချက်နဲ့ ပြည့်စုံသူကို ရှိခိုးတယ်ဆိုမှတော့ မိမိတို့ကသာ အထက်ပါအချက်များပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်နေထိုင်ဖို့ လိုပါတော့တယ်။ သိကြားမင်း ရှိခိုးခံရတဲ့သူဆိုရင် သိကြားမင်းထက်နိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒုက္ခပေးမှာ ကြောက်စရာ မလိုတော့သလို သိကြားမင်းလောက်မှ အစွမ်းအစမရှိတဲ့သူတွေက ကူညီစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာလည်း ယုံကြည်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ကူညီမစထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် သိကြားမင်း ကိုယ်တိုင် ကူညီမစပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆို မိမိတို့က သိကြားမင်းထက်သာလွန်တဲ့ ရတနာသုံးပါးကိုသာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပြီး မိဘဆရာသမားတို့ ကျေးဇူးကိုသိတတ်တဲ့အနေနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ကာ ရှိခိုးဖို့ လိုပါတော့တယ်။ သိကြားမင်းထက်နိမ့်တဲ့ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကိုးကွယ်ရှိခိုးစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။ ကျန်တဲ့အရာများကို ကိုးကွယ်ရှိခိုးတယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အထက်ပါအင်္ဂါ(၄)ချက်နဲ့ မပြည့်စုံလို့သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရှိခိုးတဲ့အခါ ရှိခိုးသူနဲ့ ရှိခိုးခံသူတို့မှာ ရှိခိုးသူကသာ ကုသိုလ်ရပြီး ရှိခိုးခံသူက ကုသိုလ်မရပါ။ ရှိခိုးခံသူဟာ ရှိခိုးခံထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းများ မရှိဘူးဆိုရင် အပြစ်သာ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့က သူတစ်ပါးကို ရိုသေလေးစားထိုက်တဲ့ အရည်အချင်များရှိပါက ရှိခိုးနိုင်ပါတယ်။ ရှိခိုးခံရသူကသာ မိမိမှာ အရည်အချင်း ရှိမရှိ စမ်းသပ်ပြီး ရှိခိုးခံသင့် မခံသင့်ကို စဉ်းစားရပါမယ်။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံစံတစ်ရပ်ဖြစ်လို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လက်အုပ်ချီတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးပေါ် လေးစားမှုသာပြတာကြောင့် ဘယ်သူမှာမှ အပြစ်မဖြစ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်အုပ်ချီသူစိတ်ထဲမှာ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အနေနဲ့သာ ပြုလုပ်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇင်းတက်သိသမျှ ရေးဖြေပေးခြင်းကို ယခုတော့ ဒီမျှနဲ့ပဲ နားပါရစေ။ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး အသိပညာ ကြွယ်ဝကြပြီး ကိုးကွယ်ရာအစစ်ကို ကိုးကွယ်ရင်း အမှန်တရားရှိရာသို့ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်……။
ခင်ခ FB ထဲကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ပေးလိုက်တာကို ဖတ်မိပြီး ဗဟုသုတအဖြစ် ရွာထဲကို Share ပေးလိုက်တာပါ။
ကိုယ်ကိုတိုင် သူများသတ်လို့ အစိမ်းသေဘ၀
နတ်နဲ့ ပတ်သတ်လျှင် ….. ယုံကြည်မှုမရှိသလို …ကိုးကွယ်မှုလည်း မလုပ်ခဲ့ဘူး … ။
နတ်ရှိတယ် မရှိဘူး ဆိုတာမျိုးလည်း မငြင်းချင်တော့ပါဘူး အန်ကယ်ရေ …. ။ နတ်ရှိလျှင်လည်း သူ့ဘာသာသူနေ ၊ ကိုယ်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေ …. ဂလိုပေါ့လေ … ။
လူကြီးတွေ ခြောက်တဲ့ .. နတ်ကိုင်လိမ့်မယ် .. နတ်ကိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောခံရလျှင် ….. စပ်ဖြီးဖြီးပဲ ရယ်ပြလိုက်ပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်ပါတယ် ….
နတ်ထက် .. နတ်ကတော်ဆိုလျှင်တော့ … လုံးဝ မကြည်ပါ .. မကြည်တာထက် ကြည့်လို့ကို မရတာ … ။ အနံ့ ပေါင်းစုံနဲ့ ခေါင်းကိုက်စရာကောင်းလွန်းလို့ ….. ။
အရှင်ကောမလ က…ဒီရွာထဲက.. .ရွာကျောင်းဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်ပါကြောင်း..
သူကြီးရေ လင့်လေးဖော်ညွှန်းပေးတာ အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဖတ်စရာမှတ်စရာတွေ ရနိုင်သလို အရှင်ကောမလ ရဲ့ အရေးတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်ဗျ။
နတ်ကို မကိုးကွယ်သင့်တာတော့ မှန်ပါတယ်..။လက်ခံပါတယ်….မြန်မာပြည်လည်း နတ်ကိုးကွယ်တဲ့
မိရိုးဖလာ ရိုးရာလေဟဲ့ မေ ဖါးဝါးရဲ့ အဲဒိလိုလေးပြောရုံနဲ့ လွယ်လွယ်လေး လက်ထဲက ကိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို လွှတ်ချလိုက်သလို များ စွန့်လိုက်ကျမယ်ဆိုရင် ……
များ ပြောစေချင်နေတာများလား လို့ 
တို့လည်းနတ်ကိုးကွယ်တယ် အင်တာနက် နဲ့ Jdonut :P………
မမေရေ ဒါပေမယ့်လည်း နတ်ကိုးကွယ်မှု့ကလည်း ရှိနေအုံးမှာပါ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အလွန်ကျယ်ပြောတဲ့ အယူအဆတွေအဖြစ် ဖြစ်တည်ခဲ့ကြသလို တစ်ချို့လည်း တိုက်ဆိုင်မှု့လား တကယ်ပေလား မသိနိုင်တဲ့ အရာတွေလည်း ကြုံဆုံနေကြတာ ရှိနေတာကိုးဗျ။
လာလာ ငိုပြလွန်းတော့ နှစ်ယောက်တောင် ဒီလောက် အုံးစားရင် ငါးရာသာဆိုရင်မချောင်ဘူးဆိုတွေးမိတော့
နတ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ ပါတ်သက်ရင် အိမ်မှာ နတ်တဲ့ပါတ်သက်တာ ဘာမှမရှိသလို ဘာရိုးရာမှလဲ မလုပ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့ယုံကြည်မူ့နဲ့ သူကိုးကွယ်နေတဲ့သူကိုလဲ ဘာမှမပြောဘူးလေ။
အဲ့ဒီကျရင်လည်း သူ့ဟာနဲ့သူ နေသားကျသွားမှာပါ လေးပေါက်ရယ်
ဒီပို့စ်ကိုတော့ ဖတ်စရာ တခုအနေနဲ့ ဖတ်သွားပါကြောင်း။ လုံးဝ သဘောတူပါသည်လို့တော့ မပြောနိုင်ပါ။ သဘောကျတာ ရှိသလို အချို့အချက်လည်း အငြင်းပွားစရာဟု ထင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးပိုင်ရှင်မှာ ရဟန်းဝတ်နဲ့ ပုံတွေ့ဖူးသဖြင့် ရဟန်းတော်လို့ ထင်ပါသည်။ ကျနော့်စိတ်ထင် မိုးပြာဆရာတွေ မေးခွန်းတွေ ဝိုင်းမေးတာ ခံရပြီး နောက်ပိုင်း သိပ်ရေးတာ မတွေ့ရဟုထင်ပါသည်။ သူ့ဘာသာသူ အလုပ်ရှုပ်သဖြင့် မရေးနိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျုပ်လည်း နတ်တွေအကြောင်း ရေးအုံးမှထင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နတ်သဘင် အစည်းအဝေးများ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမြဲတမ်း မိတ္တူတစုံရလေ့ ရှိပါသည်။ အောက်တွင် “လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်” ဆိုသောစာပါလေ့ ရှိပါသည်။
နတ်ကိုးကွယ်မှုကို.. ဝေဖန်ဆန်းစစ်လို့ရပါတယ်..။ အချက်အလက်ထုတ်နှုတ်ပြီး ကိုးကားဝေဖန်လို့လည်းရပါတယ်..။
နတ်တွေကို.. ဆဲလို့ရ ရပါတယ်..။ ဆဲခွင့်လည်းရှိရပါတယ်..
နတ်ကိုးကွယ်နေတဲ့.. လူတဦးတယောက်ကို ညွှန်းဆိုပြီး.. တိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ရင်.. သူ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးထိပါးတာမဟုတ်တာမို့.. လူ့အခွင့်အရေးအရ လွတ်ပါကြောင်း…။
လူ့ကျင့်ဝတ်အရတော့.. အများကိုးကွယ်မှုတခုကို.. ထိုက်သင့်တဲ့.. Respect ထားသင့်ပါကြောင်း..။
ဒီပို့စ်ရေးခဲ့သူ ဘုန်းဘုန်းအပါအ၀င်.. ဗုဒ္ဓဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်တာတွေ.. ဝေဖန်ရေးတဲ့.. ဘုန်းတော်ကြီး အနည်းဆုံး ၄ပါး ဒိရွာထဲမယ်..ရှိတယ်… သတိထားမိတယ်..။
(သိထားသလောက်)၂ပါးက.. နိုင်ငံခြားနေပြီး.. ပညာအဆင့်အတန်းကလည်း.. မာစတာ..ဒေါက်တာတွေမို့.. တော်တော်လေးရေးပေးကြပါတယ်..။
ဒီလို.. ဗုဒ္ဓဘာသာရေးဝေဖန်ရေးတာကို.. မိုးပြာပါဆိုပြီး..တံဆိပ်ကပ်.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွတ်စွဲတိုက်ခိုက်သူတွေရှိသမို့.. ထပ်ရေးကြဖို့.. စိတ်ပျက်သွားကြပုံရပါတယ်..။ ဘုန်းကြီးတပါးဆို.. ဖွင့်ကိုပြောသွားခဲ့တယ်..။
အတွေးအခေါ်..အယူအဆကို တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဝေဖန်မပြောပဲ.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်..ထိခိုက်မိတာတွေ..ဖြစ်ဖြစ်လာတာဟာ.. ဆိုင်ရာသူကို.. အပြန်အလှန်လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိ..
..ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေး… လူသားတဦးစီရဲ့..ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး.. အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေး..စတာတွေ.. ခွဲခွဲခြားခြား.. နားမလည်သေးကြလို့ပဲယူဆမိပါတယ်..။
သူကြီးအရေးကို ထောက်ခံတယ်၊ ပိုစ့်ဖတ်ပြီးရင် အဲဒီပိုစ့်အရေးအပေါ်မှာဘဲ ဝေဖန် ဆွေးနွေး မန့်ခြင်းပြု တာအကောင်းဆုံးဘဲလေ။ ရေးသူ ဖတ်သူ တိုင်းဟာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဖြစ်နေလို့ လေးစားသင့်တယ်လေ။
အဟမ်း အဟမ်း ဒါက ဒီလို ရှိပါတယ် သူကြီးမင်း။ မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလို ပြောရအုံးမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝေဖန်ရေးတာကို မိုးပြာပါဆိုပြီး တံဆိပ်ကပ်တာတော့ သိပ်မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်မျက်စိမှာတော့ မိုးပြာဆရာရေးတဲ့ ဆောင်းပါးဟာ တော်တော် သိသာပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်ပါ။ မိုးပြာဆရာပဲလို့ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင်ကို သိသာတယ် ထင်ပါတယ်။ အခု သူကြီးပေးတဲ့လင့်ခ်ထဲက ဆောင်းပါးရှင် ဆန်နီနေမင်း ဆိုတဲ့ ရဟန်းတော်ရေးတဲ့(ရဟန်းတော်ပုံ တွေ့လို့ ရဟန်းတော်လို့ပဲ ထင်ပါသည်) နောက်ဆုံးဆောင်းပါးတွေမှာ မိုးပြာဆရာတွေ အတော်မေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။ နာမည်တွေကိုတော့ တဦးချင်း မပြောတော့ပါ။ သွားဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်နဲ့ အမေးအဖြေ လုပ်ဖူးတဲ့ ko out of လည်းပါပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် သိပ်ပြန်မဖြေတာ တွေ့ပါတယ်။ စာရေးဖို့ အခက်အခဲ ရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရှင်ဆန်နီနေမင်းကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော် ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ သူ့စာအရပါ။
တချို့ကတော့ ရဟန်းတော်လို့ နာမည်တပ်ပေမယ့် ဟုတ် မဟုတ်တော့ သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် မိုးပြာဆရာတွေဆို Uzin ဦးဇင်းလို့ နာမည်တပ်ပြီး သံဂါယနာတင်တာနဲ့ ပဌာန်းကျမ်းတို့လောက်က စပြီး ဝေဖန်တာတွေ့ပါတယ်။ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး တို့တောင် ပါပါတယ်။ အဲဒီလို ဝေဖန်ရင်တော့ သူများက ပြန်ဝေဖန်ရင်လည်း အရေထူရပါမယ်။ အွန်လိုင်းမှာက သတ်လို့မှ မရတာဗျာ။ ဒီလောက်တော့ အရေထူရမှာပေါ့။ ကိုယ်က ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိရင်လည်း သူ့အယူအဆကို ချေဖျက်လိုက်ပေါ့။
ကျုပ်အနေနဲ့တော့ ဒီနေ့အထိ အယူအဆကို အယူအဆချင်းပဲ ယှဉ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မိုးပြာဆရာတွေကိုတော့ သိပ်မဆဲဘူးပါဘူး။ သူတို့ကလည်း ရယ်တော့ ရယ်ရပါတယ်။ ပြောတော့ ပါဠိစာတွေ မိုးမွှန်အောင်ပြောပြီး တကယ်တမ်း ဆွေးနွေးတော့ တော့်တော့်ကို သနားစရာကောင်းလောက်အောင် ယုံကြည်ချက် ချို့တဲ့ရှာသူတွေပါ။ ဒါကတော့ မိုးပြာဆရာတွေ အတွက်ပါ။
အခု စာပိုဒ်ကတော့ ပို့စ်ဖတ်ပြီးရင် ပို့စ်ပေါ်မှာ ဆွေးနွေးစေလိုတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ကိုခင်ခအတွက်ပါ။ အကျယ် ဆွေးနွေးဖို့တော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် ရေးဖြစ်နိုင်တာ တကြောင်း နောက်ပြီး ဒီပို့စ်က တင်သူရဲ့ မူရင်းမဟုတ်တဲ့အတွက် အကျဉ်းပဲ ဆွေးနွေးပါမယ်။ ဒီကွန်မန့်က ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံးရေးတဲ့ ပို့စ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ပါ။ နတ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ ဘိုးဘိုးအောင် ဘိုးမင်းခေါင်ကိုးကွယ်တာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေပါ။ တော်တော်များများ အချက်တွေ မှန်ပါတယ်။ ကောက်ချက်ချတဲ့ နေရာတော့ နည်းနည်းလိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စတုမဟာရာဇ်နတ်တွေဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပဲ အမျှပေးဝေဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျှဝေရမယ် ဆိုတာတော့ ထေရဝါဒရဲ့ အဓိကအချက်ပါ။ လူ့ပြည်က အစားအစာကို နတ်တွေ မစားနိုင်တာက နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်က နတ်တွေအတွက်ပါ။(တာဝတိသာနဲ့ အထက်ဘုံတွေပါ။)
စတုမဟာရာဇ်နတ်ထဲက တချို့နတ်တွေ စားနိုင်ပါတယ်။ ဘုမ္မစိုး ရုက္ခစိုး အနွယ်ဝင်တွေပါ။ မြတ်စွာဘုရားတောင် ရုက္ခစိုးနတ် ဖြစ်တုန်းက အရှင်အာနန္ဒာအလောင်း သူဆင်းရဲက စားဦးစားဖျားမုန့်နဲ့ ပူဇော်လို့ စောင့်ရှောက်ဖူးကြောင်း ၅၅၀ မှာလာပါတယ်။ သရဲ တစ္ဆေတွေလည်း စတုမဟာရာဇ်နတ်မှာ ပါပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အောက်တန်းစားတွေပါ။ အရောမဝင်သင့်ပါ။ တချို့ စတုမဟာရာဇ်နတ်တွေကတော့ လူတွေနဲ့ နီးပြီး တန်ခိုးလည်းကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်က နတ်တွေက လူတွေရှိရာကို လုံးဝမလာလို့ ဆိုတယ်။ လူနံ့ကို မခံနိုင်လို့ မတတ်သာမှ ဥပမာ ဘုရားပွင့်တဲ့ အခါမျိုး တန်ခိုးကြီး ရဟန္တာအစရှိသည်များကို ဖူးတွေ့ချင်မှ လာတယ်လို့ ထေရဝါဒကို ဆိုပါတယ်။
တကယ်တမ်း လူတွေကို လာစောင့်ရှောက်တာက စတုမဟာရာဇ်နတ်ထဲက တန်ခိုးကြီးနတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေနဲ့ ပြဿနာ တတ်တာလည်း သူတို့အနွယ်ဝင် နတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းက နောက်မှပဲ အကျယ်ပြောပါမယ်။ အဓိကက အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ပါ။
နောက်ပြီး နတ်ကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ ဘုရားထက်ပိုပြီး ကိုးကွယ်မှသာ သရဏဂုံပျက်တာပါ။ ကြောက်လန့်လို့ ရှိခိုးခြင်း အစဉ်အလာကြောင့် ရှိခိုးခြင်း ကိုယ့်ကို မစစေလိုလို့ ရှိခိုးခြင်း အမျိုးတော်လို့ ရှိခိုးခြင်းတွေက သရဏဂုံမပျက်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က လူတွေက သရဏဂုံတော့ ပျက်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်က နတ်တွေကိုယ်တိုင်က ဘုရားရှင်ကို မကျော်နိုင်သလို သူတို့ကလည်း တဆင့်နိမ့်နေရာမှာပဲ နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရှိခိုးနေတဲ့ ပုံတွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်က ဘုရားရှင်ရဲ့ အလုပ်အကျွေးလောက်ပဲ သဘောထားတယ်လို့ ထင်တယ်။
ပြောဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့တာက ကျနော် ၃၇ မင်းနတ်တွေကို မကိုးကွယ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့တော့ မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့။ ကျုပ်ပြောတာကို ယုံချင်လည်းယုံ မယုံလည်းနေ။ မကိုးကွယ်ပေမယ့် ကြုံတဲ့အခါတော့ မေတ္တာညွတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က ကျနော့်ကို အွန်လိုင်းမှာလည်း စာတွေနဲ့ မကလိဘူး။ ကျုပ်နဲ့လည်း မငြင်းဘူး။ ကျုပ်ပြောတာကိုလည်း မကန့်ကွက်ကြဘူး။
နောက်ပြီး သူတို့မှာက တကယ်ရှိမယ်ဆို ကမ္မဇဒ္ဓိတန်ခိုးလေး ရှိနိုင်တော့ ပြဿနာ မဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ သံသရာမှာ ငါနဲ့ အမျိုးတော်ခဲ့တာ ဖြစ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ စဉ်းစားနည်းက မေတ္တာပွားဖို့ အလွယ်ဆုံးပဲ။ ရှင်မောဂ္ဂလာန်မထေရ်ကြီးတောင် မာန်ရ်နတ်မင်းရဲ့ ဦးလေးတော်ခဲ့ဖူးတာပဲ။
ကိုစံလှကြီး ရေးသားဆွေးနွေးသွားတာလေတွေက သဘာဝရတွေးရင် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။သရဏဂုဏ်တည်ကိုးကွယ်မှု့နဲ့ဂရုဏာထားမှု့ မေတ္တာထားမှု့ တွေဆိုတာရှိမယ် ထင်ပါတယ်၊
၃၇ မင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် အခြားမည့်သည့် နတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘုံတစ်ခုခုက ဘုံသား သတ္တ၀ါတွေအဖြစ် လက်ခံနိုင်မယ် ဆိုရင်အမျှဝေပေးလို့ရတယ် မေတ္တာပို့ပေးလို့ ရတယ် ဂရုဏာ ထားပြီး ဗလိနတ်စာပြုလို့ရတယ် ဒါတွေဟာ ကိုးကွယ်မှု့မဟုတ်ဘူးနော်၊
နောက်တစ်ခုက အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုအရ သရဏဂုံပျက်တယ်ဆိုရင် ပျက်ပြီး သရဏဂုံ က ပြန်ဆောက်တည်လို့မရတော့ဘူးလား၊ တစ်ခါပျက်တာနဲ့ တစ်သက်လုံး အပြီးပျက်ရောလား မဟုတ်ဘူးနော် အသိတရားရှိလာတဲ့တစ်ချိန် သရဏဂုံသည် ချိန်ခါမရွေးဆောက်တည်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အမြဲအသက် ထက်ဆုံး ဆောက်တည်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံး မို့ ဆောက်တည် နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တာပါ၊
ပြီးတော့ မေတ္တာသုတ်အနက်မှာလည်း မြတ်စွာဘုရားက ဟောပြထားတယ်
မြင်အပ် မမြင်အပ် သတ္တာဝါတွေလို့လေ။ ဆိုလိုချင်တာက အလုံးစုံသော သတ္တ၀ါတွေနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းပြီး သရဏဂုံ မြဲမယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ ကျွန်တော်အယူအဆ အတွေးပါ မူကွဲနိုင်သလို မှားနိုင် ပါတယ်၊ ပြန်လည်တော့ ဖြေရှင်းခြင်း ငြင်းခြင်းမပြုတော့ပါ။
ခင်မင်လျှက် – ခင်ခ။
ကျနော် ဆိုလိုတာကလည်း ဒါကိုပဲ ပြောလိုခြင်းပါ။ ဂရုဏာထားပြီး ဗလိနတ်စာ ပြုလို့ရတယ်လို့ ပြောတာပါ။ နတ်ကို ကန်တော့ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါ။ တကယ်လို့ ကန်တော့ရင်တောင် သရဏဂုံ မပျက်ပါဘူး။ ဒါဖြင့် အကောင်းဆုံး သရဏဂုံတော့ မဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ yes ပါ။ သောတာပန်ရဲ့ သရဏဂုံကိုတော့ မမီတော့ပါ။ အမှန်လည်း ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ သရဏဂုံဆိုတာ ဖွဲပုံပေါ်စိုက်ထားတဲ့ လှံလိုပဲ မမြဲဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အထက်နတ်ဘုံက နတ်တွေက လူတွေဆီကို သိပ်မလာဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အများဆုံး အဆက်အသွယ် ရှိတာက စတုမဟာရာဇ်နတ်တွေလို့ ဆိုပါတယ်။ သိကြားမင်းက ကယ်တာလည်း သိပ်ကို အကျင့်သီလကောင်းပြီး ဘုန်းကံကြီးလွန်းလို့ သူမနေနိုင်မှ လာတာလို့ ဆိုတယ်။(ဥပမာ ကျုပ်လိုလူ အဟိ) ထေရဝါဒအရပါ။ ကျန်တာကတော့ နတ်လည်း လူလိုပေါ့ဗျာ။ အောက်က အရာရှိတွေနဲ့ လွှဲထားပြီး မင်းတို့ ကြည့်လုပ်လိုက်ကြကွာပေါ့။ လူတွေဆီ လာဖို့မပြောနဲ့။ ဘုရားဆီက တရားနာပြီး ပြန်သွားတာ နတ်ပြည်ရောက်တော့ မေ့သွားလို့ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က မြတ်စွာဘုရားရှင် ဘာတရား ဟောလိုက်သလဲလို့ လိုက်မေးတာ မေ့သွားလို့ ရှက်တာနဲ့ သူ့ပြသာဒ်ကြီးရဲ့ လှပပုံကို ဘာမှမဆိုင်ပဲ လျှောက်ပြောနေလို့ မထေရ်ကြီးက ဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ သူ့ပြသာဒ်ကြီးကို ခြေမတော်နဲ့ ညှပ်ပြီး လှုပ်ရတယ်ဆိုပဲ။ ဒါကတော့ ကြည်ညိုချင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် မထေရ်ကြီးအကြောင်း ပြောပြတာပါ။ မိုးပြာဆရာများ အတွက် မဟုတ်ပါ။
ဆိုလိုချင်တာက လူရော နတ်ရော ကြည်စေ အေးစေဆိုရင် ပိုကောင်းကြောင်းပါ။ နတ်ကို ကန်တော့ချင်သူတွေလည်း ကန်တော့စေ။ မကန်တော့လိုသူတွေလည်း နေမြဲပေါ့။ ကန်တော့လျှင်လည်း သံသရာမှ ထွက်မြောက်ရေးအတွက် မဟုတ်ပဲ လာဘ်လိုချင်လို့ အမျိုးတော်လို့ ရှိခိုးရင်တော့ သရဏဂုံ မပျက်ကြောင်းပါ။
အဲဒါကို ထီးချိုင့်မြို့ တည်တောဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြဖူးတာ မှတ်မိပါတယ်။ ခုန ပြောသလို ကန်တော့စရာ မလိုပဲ ကိုယ်တိုင် သောတာပန်လောက် အကျင့်သီလကောင်းသူကတော့ လိုကိုမလိုပါ။ အဲဒီ အဆင့်ရောက်ရင် အလွန်ကောင်းပါသည်။ အဲဒီ အဆင့်ဆိုရင်တော့ နတ်ကတောင် ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ သူ့ကို မကန်တော့ပါနဲ့လို့ ပြောမယ်ထင်ပါသည်။
ဟိုးအရင် အစ်ကို/မောင် တွေ ရှင်ပြုတော့ အဖွားရဲ့ မြို့လေးမှာ သွားပြုတယ်။
ဘုန်းကြီး က သမင်ခြံဆရာတော် ရန်ကုန် ကပင့်ထားတာ မို့ ခဏ ဘဲ …. တရားဟောပြီးပြီးချင်း ပြန်ကြွမှာ။
ဒီတော့ အချိန်ကြပ်တဲ့ သဘောပေါ့။
အဲဒီညနေ မောင်ရှင်လောင်း တွေ မြို့ပတ်ပြီး မြို့အဝင် နတ်စင် မှာ သွားပြရတယ်။
အဲဒီမှာ နတ်ကတော် ခေါ်မလား။ အဲဒီ မိန်းမကြီး က “ငါပျော်တယ် ဟေ့၊ ငါပျော်တယ်။” ဆိုဆို ပြီး နတ်ပူးသလို က နေတာ မပြီးတော့ဘူးတဲ့။
ဘုန်းကြီး ကလဲ ကြွလာခါနီးတော့ ကျွန်မ အမေက အဲဒီ မိန်းမကြီး နာမည် ခေါ်ပြီး ပျော်ရင်လဲ နောက်မှ ဆက်ကပါ။ အခုတော့ ရပ်ပါတော့။ ဘုန်းကြီး တွေ ကြွချိန်ရောက်ပြီ။ လို့ အော်တော့မှ
“အေး ….. အေး” ဆိုပြီး ရပ်သွားတော့တာလို့ ပြောတာဘဲ။
အလှူပြီးတော့ မှ အဲဒါကို ပြောပြောပြီး ရီကြတယ်။
တကဲ့ နတ်ကဘဲ ရပ်တာလား၊ အဲဒီမိန်းမကြီး ကဘဲ ရပ်တာလား။
ဒီဆိုဒ်ရဲ့ သဘောထားက အဓိက Debate …အပြန်အလှန် လွတ်လပ်စွာ ငြင်းခုန် ဆွေးနွေးစေပြီး စာဖတ်သူတွေကို ဒေါင့်ပေါင်းစုံက အမြင်၊ အတွေး၊ ဗဟုသုတ ပေါင်းစုံရစေချင်တော့ .. ?????
နတ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖတ်ရှုရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
၁ မှ ၅ အထိ အချက်တွေဟာ နတ်တွေကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့
ပူဇော်ဖို့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကို ဝေမျှဖို့ ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားတာတွေ့ပါတယ်
နံပါတ် ၆ မှာတော့ နတ်တွေကလည်း လေးစားထိုက်တဲ့သူကို ပြန်ပြီးလေးစားဦးညွှတ်တယ်
အပြန်အလှန် လေးစားမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးလို့ မြင်ပါတယ်
ဥပမာနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော်စက်ရုံမှာ ၀န်ထမ်းလုပ်ပြီး တရားနဲ့အညီ သားမယားကို
လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးတယ်။ကျွန်တော် ဘယ်အုပ်ချုပ်သူကိုမှ ကြောက်စရာမလိုပါ၊
နတ် ၃ မျိုး လုံးကိုလည်း ကြောက်စရာမလိုပါ၊
ဒါပေမဲ့ သိကြားမင်းတောင် သားမယားလုပ်ကျွေးပြီး အိမ်ထောင့်တာဝန်ပဲကျေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို
ရှိခိုးတယ်။(တနည်း လေးစားတယ်ဆိုရင်၊ သူလည်း သောတာပန် သိကြားမင်းကြီးပဲ။) သူတောင်
ဘုရားမရှိခိုးဘဲ ကျွန်တော့်ကို ရှိခိုးလို့ရရင်၊ (ဦးသိန်းစိန်ကြီလည်း သိကြားမင်းတောင်ရှိခိုးတဲ့သူကို ရှိခိုးသင့်နေပြီ၊ သူလည်းသမုတိနတ်ဆိုတော့ နတ်ဘုရင်သိကြားမင်းတောင်ရှိခိုးရမှတော့) ကျွန်တော်လည်း သူ့တို့ကို ပြန် မရှိခိုးသင့်ဘူးလား။
ဂါရ၀တရား မထားသင့်ဘူးလား၊(ဂါရဝေါစ။နိဝါတောစ ဆိုတာ မင်္ဂလာတရားတွေပါ)
သူရှိခိုးတာနဲ့ပဲ သူကကျွန်တော့်ထက် နိမ့်ကျသွားမှာလား၊သူ မင်္ဂလာရှိသွားမှာလား၊ ဒါဆို
နတ်တွေကို ရှိခိုးတာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ကော နိမ့်ကျတယ်လို့ ပြောနိုင်မှာလား။ ဂါရ၀တရား ဖြစ်မှာလား။
နတ်တွေက ဘာသဘောကျ လေးစားလို့ ရှိခိုးဦးညွှတ်ကြတာလဲ။ စဉ်းစားသင့်တယ်နော်။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးလောကကို စောင့်ရှောက်လို့ ။ ပါတ်ဝန်းကျင် အပေါ် မလွန်ကျူးလို့ ၊ဘ၀ မှာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ သွားလို့၊ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေပြီးမိသားစု(ပါတ်ဝန်းကျင်ကို) စောင့်ရှောက်လို့………..
ဒီအလုပ်တွေထဲက (အားလုံးကို တရားရှာသူတွေ လုပ်သင့်ပေမဲ့၊) (ဘာသာခြားရင်တောင်) တစ်ခုခု လုပ်နေတဲ့သူတွေကို သောတာပန် သိကြားမင်းကြီး(ခုဆို ထပ်မြင့်ချင် မြင့်နေလောက်ပြီ)ရှိခိုးတယ်
ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း အတုယူပြီး အရှင်ကောမလ ဆန်နီနေမင်း လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့
အချက် ၆ ချက် အတိုင်း နတ်တွေကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ပူဇော်ဖို့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကို ဝေမျှဖို့
(မိုးပြာ တပည့်လေးရဲ့ အမြင်ပါ)
အစ ဖွင့်ပွဲနေ့မှာပေါ့ ရှေ့က အစီအစဉ်တွေ
လူကြီးတစ်ယောက်က အထက်က နတ်တွေရော၊
အောက်က နတ်တွေရော၊ဘက်ပေါင်းစုံက နတ်တွေ
အကုန်လုံး ပင့်ဖိတ်ပြီး တရားနာခိုင်းသဗျာ….။
တစ်ခုရှိတယ်နော် ပဠာန်းပွဲကို ဦးစီးကျင်းပတာက
တိုင်းသံဃာ့ နာရကတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေ အပြင်
မြို့နယ် သံဃာ့ နာရကအဖွဲ့ဝင် တွေပါသဗျာ။
ယုံတာ မယုံတာ၊ ကိုးကွယ်တာ မကိုးကွယ်တာ
မိမိ ကိုယ်ပိုင်အရေး၊ တို့အရေးကတော့ စဉ်စားဦးမယ်…….။
ကယ်ဆမ်ကွေကာကို ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကို သောက်ကြသည်။